Nagu saabsan - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Kahor 2008, alaabadayada ugu waawayn waa 110kV iyo danab hoose oo gooni u goosad ah, oo leh wax soo saar sanadle ah oo boqollaal kun ah, waxaa laga sameeyaa caag silikoon caabbina oo laga soo waariday waxaana soo saaray khubaro caan ah oo caag ah, farmashiyeyaal iyo khubaro dhanka shabakada ah oo ilaa 7 sano ah. baaritaano iyo tijaabooyin. Badeecadaha, kuwaas oo ku sameeyay diiwaanka xuquuqda lahaanshaha. Ka dib markii ay tijaabiyeen Wuhan High Institute Voltage Research Institute Grid Corporation of China, Xarunta Qaranka ee Kormeerka Tayada iyo Tijaabada Insulator iyo Surge Arrester, heerarka qaranka GB11033, GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-1999, badeecooyinka ayaa ahaa loo arko inay uqalmayaan inay buuxiyaan heerarka qaranka dhammaan dhinacyada.
Dhamaan shaqaalaha-256, dadka haysta dhakhaatiirta ama shahaadada koowaad ee jaamacadeed waxay ku xisaabtamaan 7. “Ku dhaji hal-abuurnimada shirkadda; Raadi horumarka tikniyoolajiyadda; Keen badeecada tayada sare leh ”waa caqiidadeena oo dhan.
Shirkaddayadu had iyo jeer waxay ku jirtaa meesha ugu horreysa guriga iyada oo la maareynayo aaminaadeeda maareynta, xoogga farsamada ee la xoojiyay, Sameynta maareynta sayniska iyo fulinta dalabaadka ISO9001:Heerka 2000, shahaadada tayada iyo u qalmida oo dhameystiran, farsamo tijaabo oo horumarsan iyo adeeg kadib la ansaxiyay.
Waxaan rajeyneyaa inaan helo wada shaqeyn mustaqbalka dhow.
Waxaan markhaati ka nahay koritaankeena
Muddo 10 sano ah, shirkadeena dhismaha shabakada korontada iyo dib u habeynta waxay siisaa malaayiin fiilooyin fiilooyin ah iyo alaabooyin kale oo shabakad taageera. wixii ka dambeeyay 1998 cilmi-baarista iyo horumarinta shirkadda 500kV iyo insulators iskudhafka hoose, 35kV iyo danab hoose zinc oxide arrester, go'doominta biiro, fiyuus ka baxa, tuubada baska baraha korantada, xoojinta daadinta, Xadid danabyada galka galka (sanduuqa), duurka derbiga, iwm Waxay xaqiiqsatay alaabada korontada ka timaada cadaadiska hoose ilaa cadaadiska sare iyo isbedelka cadaadiska sare. ; laga bilaabo kalinimada ilaa kala duwanaanta, Waxay milicsataa shirkada inay fiiriso mustaqbalka, si loo sameeyo koox adeegyo dhameystiran oo tareen fikirka ugu weyn. Waxayna gacan weyn ka geysteen korontada, jidadka tareenka, batroolka, macdanta dhuxusha iyo nidaamka bixinta tamarta amniga shirkadaha waaweyn.
Buug-yaraha alaabada ugu muhiimsan: 220kV iyo danab hoose Zinc oxide arrester, isolate biiro, fiyuus ka baxa, tuubada baska baraha, kororka daadinta, Xadidayaasha korantada galka (sanduuqa), duurka derbiga, 110kV iyo horudhaca danab hoose, Qabow buuxa oo yaraada ama qalabka kuleylka ee kuleylka yareyn kara, 500kV iyo insulatorka isku dhafan ee danab hoose iwm noocyada kala duwan ee alaabta korantada.
Intii lagu guda jiray dhowaanahan waxaan sidoo kale qaadnaa qalabka yar yar ee xargaha (100 nooc, waqtiga dhalmada waa 15 maalmood), insulator (630 gogo ', waqtiga dhalmada 15 maalmood), go'doominta go'aanka (300 koox, waqtiga dhalmada 45 maalmood) ganacsiga, awoodda wax soo saar ee shahaadada saturation waa 40%, awooda lagu fulinayo dalabkan wax soo saar.